Football Khabar » किर्गिस्तानको घरमा नेपालको ‘दादागिरी’ : हान्यो ८ गोल, सावित्रा एक्लैको ४ गोल !
किर्गिस्तानको घरमा नेपालको ‘दादागिरी’ : हान्यो ८ गोल, सावित्रा एक्लैको ४ गोल !
किर्गिस्तानमा जारी नदेज्दा कप महिला फुटबलमा नेपालले प्रतियोगिता आयोजक देश किर्गिस्तानमाथि फराकिलो जित निकालेको छ । आज भएको खेलमा नेपालले घरेलु टोलीमाथि २–८ को फराकिलो जितसहित प्रतियोगितामा सुखद् सुरुआत गरेको हो ।
नेपालको फराकिलो जितमा स्टार फरवार्ड सावित्रा भण्डारी एक्लैले ४ गोल ठोकिन् । नेपालले पहिलो हाफमा ६ गोल गरेर दोस्रो हाफमा २ गोल थपेको थियो । नेपालले खाएका दुवै गोल पहिलो हाफमा खाएको थियो ।
नेपालका लागि सावित्राबाहेक अनिता बस्नेतले २ गोल गरिन् भने कप्तान निरु थापा र दीपा राईले समान १–१ गोल गरे । नेपालका लागि खेलको चौथो मिनेटमै सावित्राले गोल गरेका थिइन् । त्यसपछि १५औं मिनेटमा सावित्राले अर्को गोल थप्दै खेल २–० बनाइन् । तर, त्यसपछि घरेलु टोली किर्गिस्तानले लगातार २ गोल गरेर खेलमा फर्कियो । उसले खेलको १९औं र २२औं मिनेटमा लगातार गोल हान्यो ।
तर, खेलको २५औं मिनेटमा नेपालका लागि दीपा राईले गोल गरिन् भने ३०औं मिनेटमा सावित्राले गोल गर्दै आफ्नो हृयाट्रिक पूरा गरिन् । त्यसपछि खेलको ३४औं मिनेटमा अनिता बस्नेतले गोल गर्दा नेपाल २–५ ले अघि रह्यो । फेरि ३७औं मिनेटमा कप्तान निरु थापाले गोल गरेपछि पहिलो हाफमा नेपालले २–६ को सहज अग्रता बनायो ।
दोस्रो हाफमा नेपालले गोल नखाई २ गोल थप्यो । ५३औं मिनेटमा सावित्राले व्यक्तिगत चौथो गोल गर्दै खेललाई २–७ बनाउँदा ९०औं मिनेटमा अनिताले निकै सुन्दर गोल गर्दै नेपाललाई २–८ को जित दिलाइन् ।
जारी प्रतियोगितामा नेपालले किर्गिस्तानसँगै उब्जेकिस्तान र ताजिकिस्तानसँग खेल्नेछ । यस प्रतियोगितालाई १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रकाशित मिति २२ भाद्र २०७६, आईतवार १२:४१